शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहः संसदीय दलको नेतामा कसले मार्ला बाजी ? | Ekhabaronline.com
शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहः संसदीय दलको नेतामा कसले मार्ला बाजी ?
| प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन २१, २०७४ 8:59:17 AM | 116 पटक पढिएको |
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ । मनोनयन गरेको प्रत्याशीले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए दिउँसो १० बजेदेखि १ बजेसम्म निर्वाचन हुनेछ । दलको नेताका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
आइतबार साँझ ७ बजेसम्म तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयनको समयसीमामा देउवा र सिंहले नाम दर्ता गरेका हुन् । सोमबार बिहान ८ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय तोकिएको छ । सो अवधिमा उम्मेदवारी फिर्ता नभएमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ ।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएसँगै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । निर्वाचन संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा हुनेछ ।यसअघि सभापति देउवाले वारेसमार्फत् दलको नेताका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणमार्फत् उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
देउवाको प्रस्तावक विजय गच्छदार र समर्थक मानबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन् । यता सिंहको प्रस्तावकमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र समर्थकमा सांसद सञ्जय गौतम रहेका छन् ।
कांग्रेसमा ६३ सांसद् छन् । दलको नेता बन्न ३२ सांसद् आवश्यक पर्छ । आन्तरिक समीकरण अनुसार देउवा पक्षमा ३८ र पौडेल पक्षमा २५ सांसद् रहेको दाबी गरिएको छ । पौडेल पक्षका उम्मेदवार सिंह हुन् ।